Akụkọ - Laghachi na ịdọ aka ná ntị na-ewu ewu na-ewu ewu
Wearkwà akpụkpọ ụkwụ
Nkwa akwa uwe
Uwe eji akwa mmiri
Yoga Eyi akwa
Na-agba ọsọ Fabric
N'èzí eyi Fabric
Uwe akwa skịl
Soft shei ákwà
Urban eyi Fabric
Laghachi na ịdọ aka ná ntị na-ewu ewu na-ewu ewu
Mmetụta nke gburugburu ebe obibi mmekọrịta dị iche iche na ọnwụnwa nke ụdị ihe niile na-erikarị ihe dị mkpa nke ndụ, ma na-atọkwa ụtọ ọdịdị dị mfe. 'Returnlaghachi n'eziokwu' pụtara ịlaghachi omume na ndụ n'emeghị ihe ọjọọ. Mgbe ihe omumu nke uwa, aru mmadu na xinxing nile laghachitere na mbu, ma nwee obi uto na ihe ndi mara mma gbara gi gburugburu, wepu oke mgbagwoju anya ma laghachi na isi ya, ndu ga enweta oke. Agba ndị bụ isi nke 22/23 mgbụsị akwụkwọ na uwe egwuregwu oyi bụ site na ihe ndị mara mma na ndụ na okike. Saịkoloji agba na-emetụta ndị ahịa na-agbaso nchekwube ma na-edozi ahụike na gburugburu ebe obibi, na-eweta ume dị mma yana mmetụta nke nchekwa. Ya mere, oke agba sitere n'okike nke na-egosi ike dị mma bụ njirimara bụ isi, agba ndị na-anọpụ iche na-eme ka nkwụsi ike na ọgwụgwọ na-eweta nchedo, ebe obere agba agba na-eweta mmetụta dị ọcha, nchekwa, ma na-enye ume ọhụrụ. E jiri ya tụnyere oge ndị gara aga, mkpokọta agba agba nwere ike ịnwe ogologo oge, na ngosipụta nke nchekwube siri ike karịa mgbe hue ahụ anaghị efu.
Agba ọcha na-achaghị acha na-esite na ndụ, na agba na-anọpụ iche nke na-alaghachi na okike enweghị ntụpọ na eziokwu, na-eweta mmetụta nke nkwụsi ike na ọgwụgwọ. Texturedị mgbidi dị nro nke mgbidi ahụ na-eweta mmụọ nsọ na akwa ejiri ejiri mee. Agba agba ahụ dị elu, dị mfe, bara uru, na-adịgide adịgide, enwere ike iji ya gafee oge.
Unbleached na 22/23 mgbụsị akwụkwọ na oyi egwuregwu iji gosi mmetụta nke mma ọgwụgwọ, nwayọọ wrapping, mma unbleached knit ákwà na ala granular ajị anụ ákwà jikọtara na udidi, adabara niile-ihu igwe egwuregwu na mma; n'otu oge ahụ, ọcha na-enweghị ntụpọ nwekwara ike jikọta ya na ejiji versiondị azụmahịa nwere ike ịbụ ezigbo akụrụngwa maka ọfịs dị mma.
Glow Blue na-egosi mmetụta nke ịdị jụụ na teknụzụ, na-eweta ahụike, nchekwa, na nsonaazụ mmụọ na-adị ọcha, ma na-eme ka obi dajụọ. Glow na-acha anụnụ anụnụ bụ ụda isi nke oge agba agba ọhụrụ, nke na-eme ka nchapụta nke nghọta agba dịkwuo mma ma na-eme ka mgbanwe dị n'etiti agba jikọtara ọnụ. Oge ohuru nke Glow Blue na-agbakwunye nkasi obi dị mma ma dịkwa obosara, ojiji nke agba isi na ụdị nwere ike ịkọwa ya.
Glow na-acha anụnụ anụnụ bụ nkwekọ dị mkpa. Otu esi eji ya bu igodo. Glow na-acha anụnụ anụnụ bụ agba bụ isi, na-ahapụ ọtụtụ atụmatụ nkọwa zuru oke, na iji nsụgharị dị nkenke iji mepụta ụdị agba ahụ zuru oke, na -emepụta acha anụnụ anụnụ dị jụụ ma dị jụụ. Agba agba. Agba a kwesịrị ekwesị maka oge ezumike obodo, ime ụlọ mma na ejiji n'èzí eji eme ihe n'ụdị na ụdị dị iche iche, na agba ahụ siri ike.
N'okpuru isiokwu nke "ịlaghachi n'eziokwu" n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri na 22/23, a na-atụ aro agba ndị na-anọpụ iche nwere obere saturation na ọkara dị ka agba dị mma ma na-adịgide adịgide, enwere ike iji ya n'ọtụtụ ọnọdụ na oge; mmụọ nsọ sitere na soot na ndụ n'ezie, ma n'otu oge ahụ na-etinye ụda ụda ọkụ nke soot. Neutraldị na-anọpụ iche nke nwere mmetụta nke nchebe na-apụta na ahụ zuru oke, na-agbakwunye mmetụ nke acha uhie uhie na enweghị agba, nke na-eme ka ndị mmadụ nwee ahụ iru ala ma gwọọ.
Ududo-nchacha na obere saturation anwụrụ anwụrụ na-enwe ọnọdụ enweghị ike ịgbanwe agbanwe n'okpuru isiokwu nke "ịlaghachi n'eziokwu" n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri nke 22/23. Ma e jiri ya mee ihe na uwe nkịtị ma ọ bụ nke ọma ma ọ bụ nke dị nro, jikọtara ya na akwa na-acha anụ ahụ, ọ na-egosi anwụrụ ọkụ n'onwe ya Udị ọgwụgwọ na-anọpụ iche na-anọpụ iche. Styledị ụdị dị iche iche nwere ike ijikwa uwe ọ bụla kwa ụbọchị.
A na-ewepụta ọdọ mmiri dị omimi site na okike, na-egosi mmetụta nke nchedo sitere n'okike n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri nke 22/23. O sitere n'ugwu ndi nwere mineral na ọdọ mmiri abyssal n'ime omimi nke okike. Gbanahụ obodo ahụ ka ị mata ịma mma nke okike, weta echiche efu ma gbanahụ ụwa; oge ọhụrụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Ọ na-egosipụta echiche nke agba dị omimi dị elu, na-egosi ike sitere n'okike nke ụwa, ma na-agbakwunye ejiji na uwe egwuregwu, na-aghọ ụcha ejiji na ejiji n'oge oge mgbanwe nke mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri.
Mmiri miri emi ma dị jụụ dị mma dị ka isi agba, nke kwesịrị ekwesị maka egwuregwu na ntụrụndụ nke obodo mepere emepe, egwuregwu n'èzí, ahụike ime ụlọ na ụdị egwuregwu ndị ọzọ. Designdị okpu mkpuchi dị elu na-ewepụta mmetụta nchekwa, jikọtara ya na akpa ifufe na-arụ ọrụ na atụmatụ ndị ọzọ zuru ezu iji gosipụta ejiji N'èzí ọhụrụ ahụ, mbipụta nke ọdịiche dị iche iche jikọtara ya na nke silhouette na-ewu ewu na-eweta ọhụụ n'okporo ámá ọhụrụ; si n'okporo ámá gaa n'èzí na ọtụtụ ihe nkiri ndị ọzọ, okike ogbu mmiri miri emi dị mma.
A na-enweta sọlfọ sọlfọ ahụ sitere na sọlfọ nkịtị. Akwa saturation echiche nwere mgbụsị akwụkwọ nke ụbịa na nkwụsi ike oge oyi. Obere ihe nke sọlfọ mines na mkpọ mejupụtara agba sọlfọ ahụ na-ekpo ọkụ. Mgbe ọ na-egosi ọ joyụ na mmetụta uche, ọ na-agbakwunye ọnọdụ ejiji na ejiji egwuregwu, na-aghọ ụcha ejiji na ejiji n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri.
Okpukpo sọlfọ ahụ na-ekpo ọkụ na nke ejiji dabara adaba dị ka isi agba, nke eji eme ihe nkiri egwuregwu na obodo ndị a na-ahụ anya n'èzí, ma ọ bụ dị ka ihe eji achọ mma nke agba agba jikọtara ya na ụdị ejiji ime ụlọ, ọ dịkwa mma; a ubé thicker na wider kpara akwa Nchikota Micro-obodo njikere-eyi silhouette na-eweta a fashionable mepere emepe ije. Enwere ike iji akwa dị arọ ma nwee ntụsara ahụ nwere ike iji dị ka akwa elu, jikọtara ya na nsụgharị egwuregwu rụrụ arụ, iji nye nkasi obi na arụmọrụ maka egwuregwu na ihu igwe ihu igwe niile. A na-ejikọ ihe eji arụ ọrụ ikuku na ikuku na-enweghị nkọwa dị elu yana akwa mmiri na-enweghị mmiri iji gosi ụdị ejiji n'èzí. Si obodo ugwu na ndị ọzọ Mpaghara, ịnweta sọlfọ agba adabara.
N'okpuru isiokwu nke "Laghachi na Ezi", ịdị ọcha nke oroma na-enwu ntakịrị belata, yana ụda nke ụda gbara ọchịchịrị na ederede dị jụụ, ihe ngosi ahụ na-eweta mmetụta dị ntakịrị, na-agbakwunye ihe dị mkpa na-agbanwe na ikuku na-adịghị mma n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri, na eweta nchekwube n’isiokwu a. Ejiji eji eji egwuregwu eme ihe na agba isi, nke ejiri acha anụnụ anụnụ chọọ ya mma iji mee ka echiche nke ochie dị.
A na-eji isi ihe na-eme ka agba odo na-acha odo odo dị ka agba dị na mpaghara buru ibu, na ịcha mma nke agba dị iche iche na-ekwughachi mmetụta nke agba; jikọtara ya na akwa na-enweghị mmiri na ikuku na-enweghị ihe ọ bụla, ọ na-enye arụmọrụ maka ụdị ejiji n'èzí ma nwee ike iji ya mee ka ụcha dakọtara Na-ejikọ ụdị ọrụ dị iche iche iji gosipụta ụdị ejiji. Ochie dị egwu oroma kwesịrị ekwesị maka oge ezumike n'obodo ndị mepere emepe, ejiji n'èzí na egwuregwu na ụdị egwuregwu.
Isiokwu nke "tolaghachi n'eziokwu" na-elekwasị anya na ịdị ọcha na okike. A na-esite na lapis lazuli na-acha anụnụ anụnụ jupụta na larịị gbara ọchịchịrị, ma tinyekwa akwa ntụ ntụ ntụ, nke dị nro ma dịkwa mfe, na-enye ndị mmadụ obi iru ala ma na-ewebata onwe ha. Mgbe oge ezumike ahụ gasịrị, lapis lazuli blue na-egosi na nnukwu mpaghara, enwere ike ịnwale ụdị akwa ahụ iji tinye ihe ndị na-adọrọ adọrọ, nke dị omimi, njide, na ejiji.
N'oge a, lapis lazuli na-acha anụnụ anụnụ dị jụụ ma gbochie ya, ọ bụkwa otu n'ime agba agba maka mgbụsị akwụkwọ 22/23 na udu mmiri. Uwe akwa velvet nke okomoko ma obu akwa acetate nwere obere ihe na-egbuke egbuke na-eme ka ikike nke lapis lazuli na-acha anụnụ anụnụ, jikọta ya na akwa ejiji na-acha odo odo, uwe ogologo oge na ihe ndi ozo iji gosiputa ejiji ejiji nke egwuregwu obodo. A na-ejikarị lapis lazuli na-acha anụnụ anụnụ tinye ya na ya ma nwee ike iji ya na jaketị baseball buru ibu ma ọ bụ jaketị arụmọrụ mara mma, enwere ike iji ya na uwe dị iche iche iji mee ka ọ dịkwuo irè.
N'okpuru isiokwu nke "Laghachi na Ezi", a na-amịpụta odo odo fig dị ka otu n'ime agba agba nke palette. E nwetara ya site na uto okike nke fig. Ọ bụ ezigbo agba, mana n'otu oge ahụ ọ na-egosi ụdị sịntetik, yabụ na ọ nwere ma ntanetị ma akara. N'okpuru ịma mma, ụdị akwụkwọ a na agba agba dị mma ịnwale ịzụlite.
Mkpụrụ pọpụl pọpụl na-acha odo odo na-acha odo odo kwesịrị ekwesị dị ka isi agba maka egwuregwu oge egwuregwu na-adaba adaba na mgbatị ahụ ụlọ na ụdị egwuregwu ndị ọzọ. A na-eji akwa akpụkpọ anụ na-egbuke egbuke na ụdị ejiji iji mee ka ejiji ejiji. N'otu oge ahụ, enwere ike iji ya na usoro maka iji ahụ zuru oke, mara ihe na ejiji; Egwuregwu niile dabara adaba maka ụdị ihe dị iche iche n'okpuru egwuregwu ndị mepere emepe.
Post oge: Mee-10-2021
KY so n’etiti ndị na - eweta ike nweta ume ọhụrụ na ụwa nke na - eweta ihe na - agbanwe ma na - agbanwegharị ụzọ esi adigide usoro dị iche iche iji nweta ume na ụwa niile. Ugbu a na mba 18 gafee Asia, Australia, Europe, Africa na AmerikaVeztaz na-enye ike ndụ taa.
denye aha na akwukwo ozi anyi! Nọrọ mgbe niile!